विबाह गरेपछि कता हरायो गरिमा पन्तको साडी र चोली, छोटा छोटा पोषाकमा खिचाएका यि तस्विरहरु भाइरल – Gorkhali Dainik
April 5, 2021 1711
काठमाडौं । चर्चामा रहेकै बेला एकाएक हराएकी नायिका हुन् गरिमा पन्त । झोला फिल्ममा सशक्त अभिनय गरेर एकाएक चर्चामा आएकी नायिका पन्तले बेल्जियमवासी हरि शर्मा थपलियासँग लगनगाँठो कसेपछि उनी चलचित्र क्षेत्रबाट टाढिएकी हुन् । यो पनि पढ्नुस
कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले पुनः कोरिया आउन पाउने दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारका रूपमा दोस्रोपटक कोरिया आउन पाउने भएका छन् ।
यस्तो व्यवस्थासहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
यदि कुनै काम पूरा तन मन लगाएर गरिन्छ भने उक्त काम पूरा हुन केही कसैले रोक्न नसक्ने बताइन्छ । आफ्नो कामको विषयमा यस्तै सोच राख्छिन् अभिनेत्री काजल अग्रवाल । हुन त उनी एक समय बलिउडमा फ्लप हिरोइनको रुपमा चर्चित थिइन् तर उनले आफ्नो कडा मिहिनेतले साउथ इन्डष्ट्रिमा थुप्रै सुपरहिट फिल्म दिइन् र आज एक सफल अभिनेत्रीको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएकी छिन् । आफ्नो फिटनेसदेखि आफ्नो विलासी जीवनशैलीका लागि काजल धेरैजसो चर्चामा आइरहन्छिन् । उनको जीवनशैली कस्तो छ त, यसबारे कुरा गरौं ।
काजल अग्रवाललले आफ्नो एक अन्तरवार्तामा आफूले खानामा दही, फलफूल र हरिया सागसब्जी समावेश गर्ने गरेको बताएकी छिन् । यसबाहेक उनले फलफूलको रस, नरिवलको पानी र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरेको पनि बताइन् ।
यसका साथै उनी आफ्नो खानामा सलादलाई कुनै पनि अवस्थामा समावेश गर्छिन् । यसमा मौसमी फलफूल, सागसब्जी, काँक्रो, स्याउ, एभोकाडो आदि समावेश छ । आफूलाई स्वस्थ राख्नका लागि उनी दैनिक दही र पनिरको सेवन गर्छिन् ।
यतिमात्रै होइन, काजल अग्रवाल नियमित रुपमा व्यायाम पनि गर्छिन् । उनी स्ट्रेन्थ ट्रोनिङ, आथ्र्रो पाइलेट्स, वेट ट्रेनिङ र फ्रिह्यान्ड व्यायामका साथै डान्स पनि गर्छिन् ।
Prevमलेसियाबाट ल्याइयो १२ शव, विमानस्थल पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको थामिएन आँसु
Nextचियावालीले दोश्रो विवाह गरेको खुलासा; पहिलो श्रीमानबाट ८ वर्षको छोरा समेत रहेछन(हेर्नुस् भिडियो)
भि’जिट भि’सामा मले’सिया गएर लुकेका विदे’शीलाई आयो कडा कार’वाही गर्ने चेता’वनी, उस्ले तो’केको मिति भित्र स्वदेस फ’र्किनु पर्ने
नेपालगञ्जमा कोरोना सङक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टरको तस्विर !
भर्खरै गयो ६.२ म्याग्नीच्युडको श:क्तिशा’ली भूकम्प, ३४ जनाकाे मृ त्यू !